Tohero ny Fakam-panahy Haditra Miaraka Amin’ny Namanao | Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goun Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kikongo Kiluba Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Ossète Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tiorka Tiv Tseky Tsonga Turkmène Télougou Umbundu Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Voalohany, fantaro fa tompon’andraikitra amin’izay ataonao ianao, na inona na inona ataon’ny namanao.
Faharoa, fantaro hoe rehefa asaina manao inona ianao no tsy sahy mandà indrindra.
Fahatelo, fantaro hoe isaky ny inona no tena mitranga ilay izy. (Rehefa any am-pianarana? Any am-piasana? Hafa?) Ilainao ny mamantatra an’izany satria mety hanampy anao hanalavitra an’ilay izy.
Izao amin’izay no tokony hataonao: Mieritreritra an’izay azo atao mba tsy hotarihin’ny ankizy haditra, na mba ho mora kokoa ny handa an’ilay izy. (Ohatra: Raha teren’ny ankizy hifoka sigara foana ianao rehefa avy mianatra, dia miovà lalana mba tsy ho hitany.) Raha ny marina dia tsy tena tia anao ny “namana” mitarika anao haditra.
Aza manaiky ho resy, sao ho lasa andevozin’ny fanirianao ianao
Mazava ho azy fa tsy ho afaka hiala foana ianao. Mety ho sendra an’izany ianao, na ho ela na ho haingana, ary mety ho mafy be aminao ilay izy sady mety tsy hampoizinao mihitsy. Inona àry no azonao atao?
Tokony ho vonona ianao!
Diniho izao: Fantatr’i Jesosy ny hevitra ijoroany eo amin’ny resaka fitondran-tena. Tapa-kevitra ny hankatò ny Rainy izy, na inona na inona mitranga. (Jaona 8:28, 29) Fantaro mialoha koa àry ny hevitra ijoroanao.
Fanazaran-tena. Mieritrereta antony roa tokony handavanao tsy hanao ny ditra itarihan’ny ankizy anao matetika. Mieritrereta, avy eo, fomba roa hanoherana an’ilay izy.
Nahoana moa ianao no hanaiky hofehezin’ny hafa? Aoka àry ianao ho matotra ka hanao izay fantatrao fa mety. (Kolosianina 3:5) Mivavaha hatrany mba ho vitanao foana izany.—Matio 6:13.